नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक आज : के होला आजको बैठकमा? – Kendra Khabar
नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक आज : के होला आजको बैठकमा?
२०७७, १ पुष बुधबार ०७:१९
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दै छ । तीन दिनको स्थगनपछि आज बस्ने बैठकको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवादित अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा तनाव नयाँ ठाँउमा पुगेको छ ।
यो बेला बैठक कसरी बढ्ला र पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा बहुमतमा रहेको अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले के गर्छ भन्ने जिज्ञासा बढेको छ । बैठकको रणनीति बनाउन मंगलबार अध्यादेश जारी भएलगत्तै सचिवालयका पाँच सदस्य दाहाल, नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको अनौपचारिक बैठक खुमलटारमा बसेको थियो ।
बैठकमार्फत् सचिवालयका बहुमत सदस्यले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता खनाल र नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम अनि प्रवक्ता श्रेष्ठले सरकारले जारी गरेको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिईनुपर्ने बताएका छन्।
यी नेताले आजको स्थायी कमिटी बैठकबाट भने औपचारिकरुपमै अध्यादेश फिर्ता लिन निर्णय गर्ने तयारी गरेका छन् । सचिवालयका एक सदस्यले पार्टीमा परामर्श नगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको र बुधबार स्थायी कमिटी बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तावका रुपमा प्रवेश गराउने आफूहरुको तयारी रहेको जानकारी दिए ।
मंसिर २८ को स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली बुधबारको बैठकमा सहभागी हुने वा नहुने निश्चित भएको छैन । मंसिर २१ को बैठकमा भने ओली सहभागी भएका थिएनन् । उनले बैठकमा पेस भएको दाहालको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म बैठकको अर्थ नरहने बताउँदै आएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली आजको बैठकमा सहभागी नहुने सम्भावना झनै बढेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ । सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा गुटको आधारमा चलेकाले सरकारले बाध्य भएर अध्यादेश ल्याउने कदम चाल्नु परेको प्रधानमन्त्री निकट नेताहरुको भनाई छ ।
पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड सहित वरिष्ठ नेताहरुले यसअघि नै अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका छन् । वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीलाई अँध्यारोमा राखेर ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्रीले गल्ती सच्च्याउनु पर्ने बताए ।
‘सरकारले पुनः संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । यो सारतः यसअघि जारी गरेर फिर्ता गरिएकै अध्यादेश हो । त्यसबेला हाम्रो पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षलगायतका राजनीतिक पार्टीहरु र नागरिक समाजले अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै विरोध गरी फिर्ता लिन व्यापक दबाब दिएपछि सरकारले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो,’ श्रेष्ठले भनेका छन् ।
मंगलबार दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्‌को बैठक गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।